Aqoon-is-weydaarsiga Cashuur-dhimista iyo Aqoon-isweydaarsiga ay Xireen Xirfadlayaashu
Shirkadaha ku lifaaqan waxay ogaadeen in tobankiiba siddeed ka mid ah dadweynaha in aysan qaadan dhammaan lacagaha laga jaro, dhibcaha, ama laga dhaafo ee ay sida saxda ah xaq ugu leeyihiin IRS. Sidaa darteed, waxaan u fidinaa barnaamij macaamiisheenna halka aan gacan uga geysanno sidii aan ula shaqeyn lahayn khubarada canshuuraha ugu sarreysa dalka ee sharciga shirkadaha iyo nambarka canshuurta si looga caawiyo iyaga inay yareeyaan canshuurtooda illaa heerka ugu sarreeya ee sharcigu oggol yahay.
Waxaan kuu xilsaaraynaa xiriiriyaha canshuuraha shaqsiyeed, la-taliyaha ganacsiga, iyo istaraatiijiyad shirkadeed oo loogu talagalay taageerada aan xadidneyn iyo la tashiga. Kooxdaan kulama joogi doonaan oo keliya waqtiga canshuurta, laakiin waqtiga oo dhan waxaad tahay macmiil nala jooga.
Dib-u-eegis labadii sano ee ugu dambeysay ee canshuur celintaada waxaa lagu sameyn doonaa xafiisyada Robert J. Greene, CPA iyo Dennis P. Skea, kuwaas oo ka soo shaqeeyey 28 sanadood asaga oo ah wakiilka sare ee IRS.
Sidaas darteed sharciga ayaa noo oggol inaanu wax ka bedelno cashuur celinta ee la soo dhaafay illaa saddex sano haddii xaaladdaadu u baahan tahay tan oo aan helno canshuurta dollarka ee aad ka qaadatay IRS. Kuwa badan oo isu diyaariya cashuuraha ayaa si fudud u dhigaaya nambarada sanduuqyada foomamka cashuurta, laakiin run ahaantii waxaan ku siinnaa xeelado cashuureed oo gaar ah oo lagu yarayn karo culayskaaga cashuurta oo gacmahaaga lagu hayno.
Markaan eegno dhaqaalahaaga iyo shuruucda sharciga canshuuraha waxaan hubin karnaa inaad bixineyso inta ugu yar ee canshuurta ah. Hadaanan kuu keydin $ 3,000 soo celintaada wax kharash ah adiga kuguma kacno.
Nidaamkeena dib-u-fiirinta iyo hor-u-eegista hore ee ay sameeyeen koox khubaro hore ah oo IRS ah waxaad ku heli doontaa jaritaan kasta oo sharci ah, deyn iyo ka-dhaafis isla markaana aad ku dallacsiin doontaa kuwa qoran si sharci ah adigoon kicin xisaab-celinta xisaab celintaada.
Intaa waxaa sii dheer waxaan bixinaa adeegyo diyaarinta canshuuraha loogu talagalay 80% macaamiisha aan u adeegno.
Waxaan kuu soo diri doonnaa qalab waxbarasho oo maqal ah oo aad u adeegsaneyso adoo la xiriira adeegga.
Qeybta farsamada ee canshuurtu waxay siisaa macaamiisheenna ilaalin hanti dhowr ah. Haddii lagu soo ogeysiiyo nooc ka mid ah xisaab-celinta waxaan ku matali doonnaa kharash dheeraad ah.
Mar labaad haddii aanaan kuu keydineyn $ 3,000 canshuurta adiga waxaan ku soo celin doonaa khidmadayada adeegga, waana ballan qaadi karnaa tan iyo laba iyo toban bilood.
Khidmaddayadu waa mid ka yar saddex meelood meel ahaan kharashka kaydinta canshuurta ee dammaanadda $ 995 sannadka ugu horreeya. Haddii aad sidoo kale noo oggolaato inaan samayno adeeggaaga canshuurta ganacsiga waxaan dammaanad ka qaadaynaa $ 5,000 isku keydin ah oo canshuuro ah oo ku kacaya $ 1,495. Waxaad baran doontaa farsamooyinka yareynta cashuurta oo socon kara inta aad nooshahay.
Si aad iskaga diiwaangeliso barnaamijka dhimista canshuuraha, wac mid ka mid ah la taliyayaashayada 800-830-1055.